Yemagariro Webhu Suite: Iyo Yemagariro Media Management Platform Yakavakirwa yeiyo WordPress Vaparidzi | Martech Zone
Mugovera, March 20, 2021 Svondo, Kurume 21, 2021 Douglas Karr
Kana kambani yako iri kutsikisa uye isiri kushandisa vezvenhau zvinobudirira kusimudzira zvirimo, uri kunyatsopotsa pane yakati wandei traffic. Uye ... yezviwanikwa zvirinani, yega yega positi inogona kunyatsoshandisa kumwe kugadziridza zvichibva papuratifomu yauri kushandisa.
Parizvino, pane zvingori sarudzo shoma dzekushambadzira zvoga kubva kune yako WordPress site:
Ruzhinji rwemagariro enhau ekuburitsa mapuratifomu ane chinhu chaunogona kutsikisa kubva kune RSS feed.
Nesarudzo, unogona kushandisa feed chikuva iyo inongoburitsa yega kana chikafu chako chichigadziriswa, futi.
WordPress 'kambani inopawo Jetpack iyo ine Ruzhinji kushandura kusundira zvawatumira kune ako masocial chiteshi.
Muchiitiko chimwe nechimwe, iwe unowedzera ako enhau midhiya nhoroondo uye kana chidya chako chagadziriswa, meseji yakaunganidzwa uye ikaburitsa kunze kwakakodzera chiteshi. Ivo vanoshanda mushe mushe, asi pane muganho wakakura wevese.
Iko a zita rekutumira inogona kuve yakagadziriswa yekutsvaga, a pasocial media post ungangoda kuve unonyengedza uye kushandisa ma hashtag kutyaira kumwe kutarisisa. Nekuda kweizvozvo, ruzhinji rwevaparidzi vanoda kuzadza zvizere nhepfenyuro yemagariro vanotora uye handcraft yavo yemagariro midhiya. Kunyange zvichitora mamwe maminetsi mashoma kugadzirisa uye kutsikisa papuratifomu yega yega, mhedzisiro inogona kuve iri nani mushe pane kungo pusha chikafu chako kunze.
Yemagariro Webhu Suite
Tina Todorovic naDejan Markovic vakavaka WordPress plugin iyo yakabatana neBuff. Asi ivo zvavakatanga kuwedzera zvikumbiro zvinoitwa neBuffer, vakafunga kuvaka yavo chikuva - Yemagariro Webhu Suite. Social Web Suite inosanganisira zvese zvemagariro enhau manejimendi manejimendi zvinoda nekubatanidzwa zvakanyanya kune WordPress. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira:
Iko kugona kwete kwekungobatanidza zvakatumirwa, asi mapeji, zvikamu, uye ma tag futi!
Zvako zvatumirwa zvinobva zvaburitswa kumaakaundi mareti nekukurumidza kana zvangoburitswa paWordPress uye zvobva zvaendeswa kuseri kwechikamu chavo kuti vapewe zvekare gare gare!
Zvakareruka otomatiki inoshandura chikamu kana tag yeiyo positi kuva ma hashtag pane ako enhau midhiya.
Automated Google Analytics Campaign URLs ine UTM misiyano yakamakwa yega.
Panzvimbo pekuburitsa ipapo ipapo kune vezvenhau, iwo mitsara akaiswa mumutsara wenguva yakanakisa yekuburitsa.
Zvigaro zvegreen zvinokwanisa kutsikiswazve.
Iyo yakazara yekutsikisa khalendari inokupa iwe neakajeka maonero eizvo uye kana yega yega yekuvandudza ichaburitswa.
Kune rutsigiro rwakakura rweese makuru makuru enhau enhau neSocial Web Suite. Unogona kushambadza kuFacebook Mapeji kana Mapoka, Instagram kana Instagram Bhizinesi Maakaundi, Twitter, LinkedIn Profiles kana Mapeji. Uye, kana iwe uchida kuunza yako Youtube mavhidhiyo kana imwe RSS feed, iwe unogona kuzviita futi.
Social Web Suite ndicho chinhu chakasimba kwazvo pakuronga magariro ini chandakamboshandisa. Parizvino ndiri kushandisa maturusi akawanda kuita zvinoitwa neSocial Web Suite, uye ndiri kufara kwazvo kuti Social Web Suite itore nzvimbo yavo! Social Web Suite inochinja-mutambo kune vanoblogi nemabhizinesi madiki uye ichaita kuronga masisitimu zvive nyore kwazvo!
Kune izere pasocial media manejimendi chikuva seichi, mitengo yacho inokwanisika chaizvo. Yako inogona kutanga neakaundi imwechete mushandisi iyo inoparidzira kune mashanu enhau enhau maakaundi uye fambisa iyo nzira kusvika kubhizinesi account iyo inobvumidza vashandisi vatatu uye vanosvika makumi mana enhau enhau maakaundi.
Kutanga 14-Mazuva Ekuyedzwa kweSocial Web Suite
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Yemagariro Webhu Suite.
Tags: FacebookFacebook bokaFacebook nhoroondoInstagraminstagram bhizinesi nhoroondoLinkedInlinkedin mapejilinkedin profilesrss kune vezvenhausocial media kalendaripasocial media kutumirapasocial media kutsikisapasocial media kutsikisa chikuvasocial media kurongapasocial web suiteTwitterWordPressWordpress pluginYouTube kune vezvenhau
InfluencerActive: Tsvaga B2B Influencers Nyore Kune Yako Inotevera Influencer Kushambadzira Campaign